“Iiraan dab iyo holac ayey ku dheelaysaa, ma fahansana naxariista uu Obama u muujiyey. ” Trump | Berberanews.com
Home WARARKA “Iiraan dab iyo holac ayey ku dheelaysaa, ma fahansana naxariista uu Obama...
“Iiraan dab iyo holac ayey ku dheelaysaa, ma fahansana naxariista uu Obama u muujiyey. ” Trump
Waaxda Maaliyadda ee Maraykanka, ayaa shaacisay tallaabooyin ka dhan ah 13 Qof iyo Shirkado badan oo dalka Iraan laga leeyahay. Hase-yeeshee, Madaxweyne Trump, ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku qoray Maanta; “Iiraan dab iyo holac ayey ku dheelaysaa, ma fahansana naxariista uu Obama u muujiyey. Aniga taa iga ma helayaan”. Sidaa ayuu Qoraalkiisa ku yidhi Donald Trump, sida ay baahisay Laanta Afka Soomaaliga ee Idaacadda BBC-da oo aannu ka soo xigannay Warkan.
Dawladda Iraan, ayaa geesteeda sheegtay in aanay dhag u raaricin doonin waxa ay ugu yeedhay Cagajuglayn aan micno lahayn oo ka imanaysa ayey Qof aan Khibrad Siyaasadeed lahayn.
Kooxaha Cunaqabataynta la saaray waxay ku sugan yihiin Imaaraadka Carabta, Lebnaan iyo Shiinaha. Toddobaadkan, ayaa La-taliyaha dhinaca Ammaanka u qaabbilsan Madaxweyne Trump oo lagu magacaabo Michael Flynn, waxa uu sheegay in Maamulka Mareykanku digiin u diray Iiraan.
Washington(Aftahannews):- Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, ayaa Cunaqabateyn dhinaca Maaliyadda ama Dhaqaalaha ah ku soo rogay Dawladda Iiraan, ka dib markii ay dhawaan tijaabisay Gantaal kuwa Casriga ah ka mid ah.
Previous article“I know I’m not a terrorist,” said Shukri Ali
Next articleGolaha Wakiillada oo ansixiyay Miinaasinad-sannadeeka 2017